China Quality Automatic lathes hazie ọla kọpa akụkụ Ahịa na Factory - Dongguan Yiwei nkenke ngwaike Products Co. LTD
CNC na akpaka lathe nhazi
CNC post nhazi
Akpaaka akụkụ anwụ mgbatị
Nkwurịta okwu anwụ mgbatị akụkụ
Aluminium anwụ mgbatị ngwa oru ngwa
Motorcycle anwụ mgbatị akụkụ
Aluminium alloy anwụ mgbatị ike ngwá ọrụ akụkụ
Ọla kọpa aluminom igwe anaghị agba nchara ibe ya bụrụ ngwa
.Lọ > Ngwaahịa > CNC na akpaka lathe nhazi > Akpaka lathes hazie ọla kọpa akụkụ
CNC igwe ngwaọrụ na akpaka lathe nhazi nkenke akụkụ nhazi
Akpaka lathes hazie ọla kọpa akụkụ
CNC lathes hazie akụkụ aluminom
CNC lathes hazie ọla kọpa akụkụ
CNC machining nke akpaka akụkụ
Ebe mbido: Dongguan, Guangdong, China
Aha Ahịa: Yiwei
Ihe: Aluminomã € cuprumã € aluminiumã € anaghị edozi € ígwè
Product aha: Zinc na aluminum alloy anwụ mgbatị
Ndenye Nkọwa nkeAkpaka lathes hazie ọla kọpa akụkụ
Alumininã € cuprumã € aluminiumã € anaghịngọn €ígwè
Zinc na aluminum alloy anwụ mgbatị
asper ahịa na-arịọ
dijitalụ na-achịkwa lathe
Nkọwa ngwaahịa nkeAkpaka lathes hazie ọla kọpa akụkụ
Nkwakọ ngwaahịa & nzipu nkeAkpaka lathes hazie ọla kọpa akụkụ
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa
Polybag / afụ bag + katọn + pallet, nwere ike inye mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri, Shekou n'ọdụ ụgbọ mmiri, Huangpu portaccording ka ndị ahịa chọrọ.
Q: Areyou trading company or Manufacture?
A: Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Q: Gịnị ka anyị nwere ike imere gị?
A: 1. Mee ezigbo ngwọta iji belata ego gị.
2. Mepụta echiche nzuzu na ịchekwa ngwaahịa.
3. Ogo nyocha na nyocha nyocha.
4. Ọrụ mbupụ ọkachamara.
Q: you nwere ike ịme akụkụ ndị ahụ dabere na ihe atụ ndị ahụ?
A: Ee, anyị nwere ike ịlele dabere na sel gị ma mee toolingdie.
Q: Gini mere iji họrọ anyi?
A: 1. Advanced n'ụzọ zuru ezu equipments.
2. Ọkachamara R&D Team.
3. Ahụmahụ àgwà akara otu.
4. Kachasị ire otu egwuregwu.
Q: Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ gị?
A: akpụzi: 50% denosit + 50% mgbe samples akwadoro. Ogbe mmepụta: 30% nkwụnye ego + 70% tupu Mbupu.
Tags na-ekpo ọkụ: Akpaaka lathes na-edozi akụkụ ọla kọpa, China, Ogo, ọnụahịa, orylọ ọrụ
Aluminom alloy anwụ mgbatị ụgbọala breeki eletriki ụlọ
New ike ụgbọala anwụ mgbatị akara igbe
Energygbọ ala ndị ọhụrụ na-anwụ na-etinye ụlọ eletriki
Adreesị: 21 Bailang Xinwei Street, Qingxi Town, Dongguan obodo, Guangdong Province
Ekwentị: +86 13790272346
Ozi E-mail: yiwecnc@163.com
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa. The price nke Auto akụkụ ahụ mapụtara, Die mgbatị ngwaahịa, Smart ngwa bụ kasị ala ma na ezi mma.
Die mgbatị mkpuchi2021/01/18
1. Gịnị bụ anwụ mgbatị mkpuchi? Azịza: N'oge na-anwụ-mgbatị mmepụta usoro, ịgba lubrication usoro ihe na thinners na uji eze mgbidi, isi elu, ebu na-anwụ-ningfe igwe esemokwu akụkụ (dị ka sliders, ejector ọcha, punches na injectionlọ ogwu ogwu) A na-akpọkarị ngwakọta dịka mkpuchi mkpuchi ọla m. 2. Gịnị bụ ọrụ nke na-anwụ mgbatị coatings? Azịza: (1) Nọgide Na-enwe ezigbo mmanu mmanu arụmọrụ na nnukwu okpomọkụ;
Uru nke wiil ndị a na-ekwu okwu na ịnyịnya-cast wiil maka ọgba tum tum2021/01/18
Renault mepụtara wheel a na-ekwu okwu (nke a na-akpọ ugbu a ka ọ bụrụ wiil a na-ekwu okwu) na 1869. Ejiri ya maka ịnyịnya ígwè wee mechaa ghọọ ọgba tum tum na ụgbọala. A na-echepụta ọnụ ndị ahụ n'isi mmalite, na teknụzụ tozuru oke. Ọ nwere uru ndị a: